Puntland Archives - Page 3 of 21 - Sawirrotv
Madaxweyne Gaas oo Beeniyay in Imaaraadka Carabta uu Saldhig Meleteri ka Furanayo Boosaaso (Dhagayso)
March 11, 2017 – Madaxweynaha Maamulka goboleedka Puntland C/wali Maxamed Cali “Gaas” oo ku sugan dalka Isu taga Imaaraadka Carabta, ayaa beeniyay warar maalmahan soo baxay oo ku aadan in Imaaraadka Carabta Saldhig Millateri uu damacsan yahay inuu ka furto Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari. Madaxweyne Gaas ayaa sheegay inaysan jirin wararkaasi la isla dhexmarayo, …
Puntland iyo Galmudug oo ku Heshiiyay in La’isku Furo Isu Socodka Gaadiidka Maagalada Gaalkacyo (Dhagayso)
March 09, 2017 – Maagalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa maanta heshiis ku saxiixday mas’uuliyiin ka kala socday maamuladda Puntland iyo Galmudug. Gudoomiyeyaasha Gaalkacyo ee labada maamul ee Puntland iyo Galmudug ayaa saxiixay heshiiska ay gaareen labada maamul, si la’isuku furo gabi ahaanba magaalada Gaalkacyo, waxaana ku qornaa heshiiskaas sidii loo furi lahaa …
Ciidamo Xoog Kula Wareegay Koontaroolka Koonfureed ee Magaalada Garoowe iyo Gaadiid Badan oo ku Xaniban Halkaasi (Dhagayso)
March 09, 2017 – Gaadiid fara badan ayaa ku xaniban Koontaroolka Koonfureed ee Magaalada Garoowe, kadib markii ay xalay halkaasi la wareegeen ciidan ka gadoodsan mushaar la’aan. Ciidamada maamulka Puntland ee la wareegay gacan ku haynta Koontaroolkaasi, ayaa u diiday gaadiidka inay galaan Magaalada Garowe, waxayna u sheegeen gaadiidleyda inaysan dhaafi karin Koontaroolka. Qaar ka …
Qaraxii Xooganaa ee Shalay Galab Lagu Dhaawacay Xildhibaan C/qaadir Faarax Bootaan (VIDEO)
March 09, 2017 – Xildhibaan C/qaadir Faarax Bootaan oo ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland, ayaa shalay casir liqii waxa uu ku dhaawacmay qarax loogu soo xiray gaarigiisaka dhacay Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug. Wararka ka imaanaya Magaalada Gaalkacyo, ayaa sheegay in loo maleynayo in qaraxani lagu soo xiray gaariga gaarka ah ee Xildhibaan C/qaadir …
Madaxweyne C/weli Gaas oo Sheegay in Nabadoon Xarago uu Yahay nin Katirsan Ururka Al Shabaab (Dhagayso)
March 06, 2017 – Madaxweyne C/Wali Maxamed Cali (Gaas) oo waraysi siiyay laanta afka-soomaaliga ku hadasha ee VOA ayaa iska diiday eedeynta ku saabsan inuu xiray nin Nabadoon ahaa oo laga yaqaano deegaanada Puntland. Madaxweynaha Puntland ayaa taasi bedelkeedana waxa uu sheegay inuu u xiranyahay nin Shabaab ka tirsan, ee aysan xirin Oday Nabadoon ah. …
Abaaraha ku Dhuftay Goboladda Dhexe oo Gaaray Heerkii Ugu Xumaa & Dad Haraad iyo Gaajo u Geeriyooday Dhulka Miyiga ah (SAWIRRO)
March 05, 2017 – Goboladda Mudug iyo Nugaal oo kamid ah goboladda dhexe ee dalka ayaa waxaa laga soo sheegayaa xaalado adag oo dhinaca nolosha ay ka taaganyihiin deegaanadaasi, islamarkaana dadka ay haysato xaalad nololeed oo ay sababtay abaarta ka jirta goboladaasi. Dhulka fog fog ee miyiga ah ayaa waxaa maalin walba laga soo helayaa …
DAAWO: Barnaamijkii Dhaliyay in Taleefishinka Universal Laga Mamnuuco Deegaanada Puntland (VIDEO)
March 05, 2017 – Maamulka Puntland ayaa waxuu maanta soo saaray warsaxaafadeed uu taleefishinka Universal kaga mamnuucayo in uu ka howlgalo deegaanada Puntland, kadib markii taleefishinka Universal uu muuqaal shaaciro ah oo laga baahiyay taleefishinkaasi kaasi oo u cuntami waayay maamulkaasi. Muuqaalkan ayaa waxaa ka soo muuqaday nin loo ekaysiiyay madaxweyne Gaas oo ka hadlay …
Puntland oo Maanta Laga Bilaabo Taleefishinka Universal ka Mamnuucday Deegaanadeeda (Akhriso)
March 05, 2017 – War saxaafadeed ka soo baxay Wasaarada warfaafinta iyo isgaarsiinta Puntland ayaa soo bandhigtay Warqad looga joojinayo Telefisinka Universal inuu ka howlgalo deegaanada uu ka arimiyo maamulka Puntland. Maamulka Puntland ayaa ku eedeeyay Telefishinka Universal baahinta warar been abuur ah iyo iska hor keenida Shacabka iyo Maamulka, waxaana sidoo kale Puntland ku …
Abaaraha ka Jira Deegaanada Puntland oo ka sii Daraya, Camey iyo Farmaajo oo ka Xaajooday (VIDEO)
March 04, 2017 – Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey oo ah Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland ayaa kulan la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyada federaalka ee Soomaaliya mudane, Maxamad Cabdullaahi farmaajo.. Labada mas’uul ayaa ka wada hadlay abaarata ka jirta dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Puntland iyo sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka abaarta ku habsetay. Madaxweyne ku …
Weerar Loo Adeegsaday Bambo Gacmeed oo Maanta Lagu Qaaday Maxkamada Magaalada Boosaaso
March 04, 2017 – Wararka ka imaanya Magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari ayaa sheegaya in maanta qarax bambaano lagu weeraray maxkamada Darajada koowaad ee magaalada Boosaaso, halkaasi oo ay ka socdeen shaqooyinkii maalinlaha ahaa. Wararka waxa ay intaasi ku darayaan in nin dhalinyaro ah uu maxkamadda ku tuuray bam gacmeedk, waxaana ka dhashay Khasaare dhaawac …